Ụbọchị My Pet » Gịnị Twitter Pụrụ Ịkụziri Ị Banyere Ịhụnanya?
Ụbọchị ndị a, -akparịta ụka n'Ịntanet, na-eleghị anya na ebe ndị na-emefu ọtụtụ n'ime ha mgbe ha na-free.
Ezie na ọ bụ eziokwu na mgbe mgbe oge na-elekọta mmadụ media amama na-abaghị uru na ndị niile baseless chitchats na gossiping, mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ejedebe na-amụta a otutu akpali akpali ma na mkpa ihe ndị a weebụsaịtị. Dị ka ọmụmaatụ, e nwere mmadụ netwọk peeji nke na-enye ọhụrụ ntụziaka, peeji ndị na-kụziere ndị mmadụ banyere ọhụrụ ejiji, were gabazie.
Mgbe ahụ, e nwere ụfọdụ ihe onye nwere ike ịmụta site nanị ịbụ a mgbe onye ọrụ nke na a na-elekọta mmadụ na netwọk; N'okpuru bụ ụfọdụ ihe ịhụnanya ihe Micro-ịde blọgụ saịtị Twitter na-akụzi.
1. Ịhụnanya bụ bụghị nanị banyere anọ ọnụ:
Nke a bụ otu ihe mmụta Miley Cyrus nyere anyị site Twitter n'oge ya gbasaa na enyi nwoke Justin Gaston na February, 2011. Ikwupụta ntisa na Micro-ịde blọgụ saịtị, Cyrus kwuru na ezi ịhụnanya nwere ike ghara inwe obi ụtọ ogwugwu dị ka ezi ịhụnanya mgbe mechie.
Ihe mbụ kpakpando nke telivishọn usoro Hanna Montana kwukwara na ka Go bụ ụzọ ọzọ nke igosipụta ịhụnanya. Nke a bụ nnukwu ịhụnanya ihe niile, na-eto eto ma ọ bụ agadi.
Ọ bụrụ na ị hụrụ mmadụ n'anya, ị ga-mara otú ka ya / ya aga. Ọ bụrụ na mmadụ na-adịghị na-achọ ịnọgide na-ahụ gị n'anya ma ọ bụ na ị na-, ị kwesịrị ị na mgbe na-achọ ime ya / ya na-eme na forcefully; nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na ị hụrụ na onye, ị ga-achọ ịhụ ya / ya obi ụtọ.
2. E nwere ihe ụfọdụ ị na-ekwesịghị banyere mgbe anọkọ na onye gị na:
Nso nso e a hash mkpado trending on Twitter na nyeere ndị kpọkọta ihe ọmụma banyere ihe na-ekwesịghị kwuru na a ụbọchị. The hash mkpado na-aga dị ka nke a: #FiveWordsToRuinADate.
Ọrụ gwa a ọnụ ọgụgụ nke aro banyere okwu nke nwere ike ibibi a ụbọchị. Ụfọdụ ndị aro ndị n'ezie ruru na-echeta.
Dị ka ọmụmaatụ, Matt Lieberman, bụ onye a kpọrọ maka AfterBuzz TV, dere na dị ka ya ise okwu na-nwere ike ibibi a ụbọchị na- “ị susuo dị ka nwa nwanne nna m”. Gịnị Lieberman chọrọ ikwu bụ na ọ bụ a akamba ndudue ikwu banyere ihe i gara aga mmekọrịta n'ihu ọhụrụ gị ịhụnanya.
Ihe atụ ọzọ bụ tweet site Jeff Drake, a so dee. Ise machibidoro iwu okwu, dị ka ya, na- “mama m ike ụgbọala anyị”. Nkwupụta a pụrụ ịbụ nnukwu spoilsport ma ọ bụrụ na kpere mgbe anọkọ na onye gị na, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ a Ihọd.
Ee, ị n'ezie nwere ikike n'anya mama gị, ma ọtụtụ ụmụ agbọghọ asị ịhụ nwoke na ndụ ha na-eweta akwụkwọ nke ha na mama ma ọ bụ ọbụna na-ekwu okwu nke ukwuu banyere ya.
Tinye hash mkpado #FiveWordsToRuinADate na Twitter search mmanya; ị ga-esi na-ahụ ọtụtụ ndị dị otú ahụ na-akpali mmasị na bara uru aro.
3. Little ihe nwere ike ime ebube:
Ịhụnanya bụ banyere obere ihe; dịkarịa ala ụka ndị na-Twitter na-atụ aro ya. Dị ka ọmụmaatụ, a tweet site Patama Posts na-egosi na ụmụ agbọghọ n'anya ahụmahụ nke na-afat si n'azụ.
Ndị a dị nta ihe nwere ike ime ka onye gị na obi na-adị hụrụ n'anya na Twitter na-akụzi otú ọtụtụ n'ime ha.
Olee otú Iji Nwee Nchekwa dịwara